China S921 Kumhanya kwakapfava chubhu labeler Kugadzira uye Fekitori |S-conning
SLA-310 Round Bhodhoro Vertic...
Yakazara-otomatiki yakangwara ...
Ndege Labeling Machine
S307 High speed vial labeli...
S308 High kumhanya rotary vial...
Kunyanya akakodzera zvekuzora, zvigadzirwa zvekuchengeta munhu, chikafu uye mamwe maindasitiri ekurongedza maapplication.
Nyorera kune izvo zvinodikanwa zvekunyora zveround & hollow nyoro chubhu, zvakare inogona zvinoenderana nehunhu hwehunyoro chubhu kune chinzvimbo chekunyora.
Iyo inogoneka S921 Yepamusoro Yekumhanya yakapfava chubhu labeler yakashongedzerwa neitsva uye inokurumidza netcon control tekinoroji (inosarudza).Nekungodzvanya kweimwe-yekubata skrini, unogona kugadzirisa nyore marongero akasiyana echigadzirwa chako chinodiwa.
Muchina wedu une servo madhiraivha anoburitsa kwakaringana uye nekumhanya kwakanyanya kudzokororwa kunyora.Iyo inosvikika nyore vhiri reruoko inogadzirisa uye padivi njanji inokurumidza kugadzirisa inobvumira yakawanda "up-nguva" pamutsetse wako wekugadzira!Iyo S921 inoshandiswa mune angangoita ese maindasitiri akadai semishonga, zvigadzirwa zvekuchengeta munhu, chikafu, mavhitaminzi, zvekuzora, uye makemikari, uko kwakanyanya-mu-kirasi kuvimbika isimba rekugadzira nemazvo.
Vadivelu Comedy Mature Technology
iri nyore kushandisa uye compact chimiro: Imbomira kunyora kana pasina chinhu chinopinza, chinzvimbo chechinhu auto-kururamisa kana pasina chezita, uye sarudzo yekuona otomatiki basa.
Muchina wese kudzora nekombuta, otomatiki kuona mabhodhoro evimbiso
uye label synchronously, uye midziyo zvakare inogona kuve yakashongedzerwa nemuchina wekudhinda unopisa
tora yakachinjika kugovera, yakaomesesa clamping bhandi kunyora simbisa iyo yakanyatsojeka uye nekumhanya.
Kubva padhizaini, nguva yekutanga yekushanda, manejimendi, kugadzirisa uye mitsara yekugadzira ramangwana, S-conning funga zvakanyanya iwe nekambani yako.
- Yakavakwa-mu-operation bhuku: vanotanga vanogona kudzidza kubva pakuratidzira mashandisiro emakina mukati menguva pfupi.Izvi zvinochengetedza zvese mari uye nguva panguva yekudzidziswa.
Yakavakwa-mu-dambudziko rekugadzirisa bhuku: chiratidziro chaizotungamira mushandisi kuburikidza nekugadzirisa matambudziko.
-Mushandisi-inoshamwaridzika label kureba kuseta system: Iyo yekumusoro-kusvika-zuva HMI kudzora inobvumira mushandisi kuseta label paramita.
-Kudzora sisitimu yelabeler inoshandisa hombe yekubata chidzitiro chepaneru, yakasimbiswa neEC uye UL mirau kuti ishande uye inobudirira yekutarisa maitiro ekunyora.
-Iyi yakasarudzika uye yekuvandudza sisitimu inogona kuvimbisa kuti label kuseta kwakarongwa nemazvo uye kuiswa pachinzvimbo chakakodzera.
-Kunyora counter-inochengeta matipi ehuwandu hwezvigadzirwa zvakagadziriswa nemuchina.
- Pre-set counter - huwandu hunogona kugadzikwa kune yekugadzira batch uye muchina unozomira otomatiki sezvo huwandu hunowanikwa.
-Kungobata-bata chidzitiro kunotendera iwe kunonoka label application uye kugadzirisa label chinzvimbo.
Tinokupa zvakawanda kupfuura zvaunoda
Maitiro ekurevera anodzorwa neSiemens micro process controller PLC, kuve nechokwadi chekukurumidza uye kwakadzikama kuita.
Label dispensing inofambiswa neindasitiri giredhi servo mota (Yaskawa/Schneider/Honeywell) kuti ive nechokwadi chekunyora nemazita, kunyatsoita basa, uye kumhanya uku ichidzikira pakushandisa simba.(Nekuda kwekumhanya kwakanyanya, iyo servo mota inogona kusarudzwa)
Inoshandisa yakakwirira-yekupedzisira branded fiber optics uye infrared sensors (Keyence / Shumba / Dalsa / Kurwara / Leuze) kunyatsoona uye chiratidzo chinokonzeresa pasina kukanganisa.
* Yakazara servo injini ine simba system inopa yakanyanya kugadzikana uye iko kurongeka.
* Inoshanda kune ese marudzi ebhokisi kana mabhodhoro ane dhayamita 30-150mm.
* Yepamusoro-yekupedzisira chikamu kutorwa kubva kuGerman, France, Japan, USA mhando.
* Sensitive dhizaini uye chimiro chesainzi.
* S-conning yakasarudzika patent dhizaini, yakasarudzika muindasitiri yekurongedza.
* Makore gumi nemaviri ruzivo, nyanzvi yekugadzirisa.
* Yakadzika mushure mekutengesa sevhisi.
* Yekumhanya yekunyora inowiriraniswa otomatiki nekumhanya kweconveyor kuti ive nechokwadi chekunyorwa kwemhando.
* 50 Job Memory kuitira nyore kuyeuka.
* Precision servo mota dhiraivha pane label misoro.
* Ita shuwa GMP zvakatipoteredza zvinodiwa.
* Professional HMI yekubata chidzitiro: yakawedzera munhu kubata yekubata chidzitiro
Kugadzirisa kuri nyore uye kunoshanda.
Sophisticated variable frequency drive controller inovimbisa kugadzikana kwekumhanya uye +/-0.5% kusarongeka mwero.
Nhungamiro yechitima chikamu chinogadzirwa nemhando yepamusoro aluminium yakavharwa nepurasitiki-yakapfeka maindasitiri epurasitiki kuti ive nechokwadi chekunyora uye kuchengetedzwa kwechigadzirwa, kuchengetedza chigadzirwa chemutengi chinoyevedza uye chiri muchimiro chakakwana.
Labeler base yakagadzirwa nesimbi isina tsvina kuti ive nechokwadi chakazara anti-ngura.Iyi dhizaini inoita kuti muchina uye nzvimbo yekugadzira hutsanana inochengetedzwa inoitira GMP zviyero.
Mavhiri anochengeta muchina unotakurika, zviri nyore kana uchichinjika kune akasiyana mitsara yekugadzira.Iyi inotsigira nharembozha inowedzera kukosha kwekudyara kwako.
Dimension (L)2083 x (W)929x(H)1870mm
Container size φ20-50mm (L) 66-185mm
Labeler kururama ± 0.5 ~ 1.0mm
Zvakapfuura: Lipstick yezasi yekurevera muchina
Zvinotevera: S308 High kumhanya rotary vial labeling muchina
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.
Carton / Bhokisi Pamusoro uye Pazasi Surface Kunyora Ma...
Round Bhodhoro Kaviri Side Sticker Labeler
S216 Pamusoro & Pazasi Labeler
Sticker Labeling Machine Manufacture, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Plastiki Chisimbiso Machine, Syringe Assembly uye Labeling System, Commercial Bottle Labeling Machine, Printer For Cosmetics Jars Bottles,